नेपाल आज | यस्तो छ धनगढीदेखि काठमाडौसम्मको यात्रा विवरण, एउटा फोन जो सँग पवित्राको झगडा परिरहन्थ्यो
(उनको मोबाइलमा बारम्बार फोन आईरहन्थ्यो । फोनमा दुइ जनाबीच विवाद भएको बुझिन्थ्यो । पवित्राले अबदेखि फोन नगर्नु भनेको मात्र बुझेको थिए । तर फोनमा झगडा भएको त स्पष्ट थाहा थियो)
बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका ०५ की २३ वर्षिया पवित्रा गुर्धामी असार २८ गते काठमाडौको भत्केकोपुल स्थित हेरिटेज बोर्डिङको एउटा कोठामा मृत फेला परेकी थिइन् । पवित्रा मृत अवस्थामा भेटिएको आज करिब एकहप्ता पुरा भएको छ । यसबीचमा पवित्राको हत्या, आत्महत्या वा आत्महत्या दुरुत्साहन के हो ठोस निष्कर्ष आएको छैन ।
पवित्राका आफन्तहरुले घटना आत्महत्या नभएर हत्या भएको दाबी गरिरहेकाछन् । यसैबीच मृतक पवित्राका दाजु कृष्ण बहादुर गुर्धामीले बिहीबार महानगरिय प्रहरी वृत गौशालामा जाहेरी दर्ता गरेकाछन् । पवित्राको शब त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । सम्भवतः आज पोस्टमार्टम हुन्छ भनेर पारिवारिक स्रोतले भनेको छ ।
पवित्रा असार २१ गते साँझ करिब ५ बजे अत्तरिया चोकबाट ना ७ ख ४०९० नम्बरको बसमा काठमाडौको लागि चढिन् । उक्त बसका चालक अमृत विश्वकर्मा पवित्राका चिनजानका मान्छे थिए । पवित्रा र अमृतबीच केही वर्ष पहिले यात्रा कै क्रममा परिचय भएको अमृत बताउँछन् । पवित्रा काठमाडौ आउँदा जाँदा प्रायः अमृत कै बसमा आउने जाने गरेको अमृत बताउँछन् । अमृतका अनुसार यो पटक पनि पवित्राले बझाङबाट काठमाडौ आउँदैछु भनेर २० गते नै अमृतलाई फोन गरेकी थिइन् ।
असार २१ गते साँझ अत्तरियामा अमृतसँग भेट भयो । करिब ५ बजे अमृतले आफैले गाडी चलाए । पवित्रा ड्राईभर सिटको पछाडि बसिन् । यो पटक पवित्राको यात्रा तनावपुर्ण भएको अमृत बताउँछन् । पवित्रालाई बारम्बार एउटा केटा मान्छेको फोन आईरहन्थ्यो । नेपाल आजसँग फोनमा कुरा गर्दै बसका चालक अमृत विश्वकर्मा भन्छन्, ‘उनि मेरो सिट भन्दा ठिक पछाडि बसेकी थिइन् । उनको मोबाइलमा बारम्बार फोन आईरहन्थ्यो । फोनमा दुइ जनाबीच विवाद भएको बुझिन्थ्यो । पवित्राले अबदेखि फोन नगर्नु भनेको मात्र बुझेको थिए । तर फोनमा झगडा भएको त स्पष्ट थाहा थियो ।’
‘पवित्राको मोबाईलको वालपेपरमा एउटा केटाको फोटो पनि थियो । बाटोभरी करिब ७ पटक जति झगडा भएको जस्तो लाग्यो ।’ अमृत भन्छन् । पवित्राले यसपटक बझाङंबाट काठमाडौ आउँदा खर्च पनि नभएको बताएको अमृत भन्छन् । पवित्रासँग खर्च नभएको हुनाले कोहलपुरमा आफैले खाना खुवाएको उनि बताउँछन् ।
रातभरको यात्रा गरेपछि २२ गते विहान ११ बजे बस चितवनको नारायण गढ पुग्यो । पवित्राले खर्च कम भएको भन्दै आफु काम गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश लिम्बुलाई फोन गरेको अमृतको बयान छ । पवित्राले फोन गरेपछि प्रधानाध्यापक लिम्बुले भत्केको पुलमा रहेको साकेला सहकारीबाट पाँच हजार नगद पठाएका छन् । पवित्रासँग डकुमेन्ट नभएर त्यो पैँसा पनि अमृत कै नाममा पठाएको भेटिएको छ । असार २२ गते दिउँसो करिब ११ बजे नारायणगढ पुगेकी पवित्रा अमृतको वयानलाई मान्ने हो भने ३ दिन त्यतै बसेको देखिन्छ । अमृतका अनुसार असार २१ अत्तरियाबाट उनिहरु हिडेका थिए । असार २२ गते नारायणगढ पुगे । प्रधानाध्यापक राजेश लिम्बुले असार २५ गते शुक्रबार अमृत विश्वकर्माको नाममा पाँच हजार पठाएकाछन् । पवित्राले खर्च कम भएको भनेपछि व्यक्तिगत सहयोग गरेर पाँच हजार पठाएको लिम्बु बताउँछन् । साकेला सहकारीको बैंक ट्रान्जेक्सनमा पनि कारोबार भएको खोजका क्रममा भेटिएको छ ।
पवित्रा तिन दिन किन बसिन् नारायाणगढमा?
असार २२ गते नारायणगढ पुगेकी पवित्रा केहीदिन त्यतै बसेकीछन् । अमृतलाई यसबारेमा केरकार गर्दा बोेली फेरेकाछन् । उनले सुरुमा त त्यता नबसेको जिकिर गरे । तर असार २५ गते पैँसा कस्ले रिसिभ गर्यो त्यसोभए भनेपपछि पैँसा आफैले रिसिभ गरेको तर पवित्रालाई नभेटेर आफ्नो सहचालकलाई पैँसा बुझाइदिन भनेको बताउँछन् । यसबीच अमृतको कुरा स्पष्ट रुपमा बाँझिएको छ । यसअघिको समाचारमा पवित्राको नदि छेउको घर छतमा खिचिएको तस्बिर नारायणी छेउमा भएको खुलेको छ । र त्यो तस्बिर पनि अमृतले नै खिचिदिएको स्विकारेकाछन् । नारायणी छेउको घरको छतमा फोटोसम्म खिचिदिएका अमृतले २५ गते पवित्रालाई नभेटेको भन्दा उनिमाथि शंका उब्जिएको छ । त्यो बीचमा नारायणगढमा उनिहरु फोटोसम्म खिच्न भ्याएकाछन् । सायद उनिहरु त्योबीचमा तिनदिन सँगैबसेको हुनुपर्छ । नभए पवित्रा नारायणगढमा कहाँ बसिन् त? तर अमृतले आफ्नो डेरा पनि नारायणगढ मै भएकाले आफु डेरामा आएको बताउँछन् ।
अमृत र पवित्राबीच मनमुटाब
अमृतका अनुसार निषेधाज्ञाका कारण अमृतको बस काठमाडौ आउन पाएन । पवित्रा अर्काे गाडीमा २५ गते काठमाडौ आईन् । पवित्रा काठमाडौ पुगेपछि राती करिब ११ बजे आफुलाई फोन गरेको उनि बताउँछन् । तर पवित्राको फोन आफुले नउठाएर आफ्नो श्रीमतीले उठाएको बताए । उनि भन्छन्, ‘म सुति सकेको थिए । करिब ११ बजेतिर पवित्राको फोन आएछ । मेरी श्रीमतीले उठाएपछि म सँग पनि झगडा भयो । पछि मैले पवित्रालाई फोन गर्न खोज्दा मेरो नम्बर ब्ल्याक लिस्टमा राखेकी रहेछिन् । त्यसपछि मेरो उनिसँग सम्पर्क भएको छैन् ।’
अमृतले बताएजस्तो पवित्राको फोनमा झगडा भएको हो वा अमृतसँग पवित्राको सम्बन्ध थियो र उनीहरुबीच झगडा भएको हो । फोनमा झगडा नै भएको हो भने को थिए ती फोन गर्ने व्यक्ति? किन झगडा भएको होला? यसबारेमा प्रहरी र प्रशासनले आवश्यक खोज गरोस् । पवित्रा कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आत्महत्या नै गरेको दाबी गरिरहेकाछन् । मृतकका आफन्तले हत्या नै हो भनेर दाबी गरिरहेकाछन् । पछिल्लो घटनाक्रम र पवित्राको फेसबुक स्टाटस तथा टिकटकबाट आत्महत्या दुरुत्साहनको आशंका पनि बलियो भएर आएको छ । प्रहरी र प्रशासनलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेको खण्डमा हामीसँग भएका अडियो प्रमाणहरु उपलब्ध गराउने छौ ।
पवित्रा गुर्धामी आत्महत्या हत्या आत्महत्या दुरुत्साहन